Umphathi omkhulu we-OnePlus utyhile ukuba i-OnePlus 7 Pro iya kuba nescreen esimangalisayo | I-Androidsis
Umphathi we-OnePlus utyhile ukuba i-OnePlus 7 Pro iya kuba nomboniso omangalisayo
UAron Rivas | | Izaziso, OnePlus
Abavelisi basakhangela iindlela zokwahlulahlula kukhuphiswano, kwaye i-OnePlus yenye yazo.
Ngesi sihlandlo, umenzi uyaqhayisa ngaloo nto Isikrini esilandelayo OnePlus 7 Pro izakutshintsha imigaqo yomdlalo. Kudliwanondlebe olukhethekileyo kunye esengozini, UPete Lau, umphathi wenkampani, uqinisekisile ukuba isixhobo siza kuba nescreen esimangalisayo.
Kudliwanondlebe, isigqeba siqinisekisile ukuba ngamagama eefowuni ezimbini eziza kuphehlelelwa kwinyanga ezayo OnePlus 7 kunye ne-OnePlus 7 Pro. Nangona kunjalo, kuphela le yokugqibela iza kuza nekhusi elitsha elibabiza kathathu uhlahlo-lwabiwo mali oluqhelekileyo lweepaneli zokubonisa.
Ewe imveliso yethu entsha iya kusebenzisa itekhnoloji entsha yokubonisa. Sityalile imali kakhulu (itekhnoloji ziindleko ze-3x zezinye izinto ezibonisa iflegi) ekuphuhliseni itekhnoloji ye-OnePlus kuphela, eyona nto ibalaseleyo kwilizwe liphela. https://t.co/HVDhfI8uDA
-Pete Lau (@ petelau2007) Aprili 22, 2019
Umnumzana uLau waye lumkile ukuba angaboneleli ngeenkcukacha zescreen, kodwa wathi wothukile okokuqala xa eyibona. Isikrini se-OnePlus 7 Pro siya "kuchaza ngokukhawuleza nangokugudileyo" kwaye "sihamba kakuhle kwaye sibukhali kakhulu".
Kuyatshiwo oko Iphaneli entsha inezinga lokuhlaziya lama-90 Hz, ekhawulezayo kuneefowuni ezininzi okwangoku. I-OnePlus ayisiyiyo eyokuqala yokuvelisa ifowuni ngenqanaba lokuhlaziya eliphezulu. I-Sharp, iRazer, kunye ne-ASUS sele zineefowuni kwireferensi yazo enemiboniso enereyithi yokuhlaziya engaphezulu kwe-60 Hz.Ngaphandle kweefowuni ze-ASUS, zeSharp kunye neRazer enenqanaba lokuhlaziya eliyi-120 Hz.
Njengazo zonke iifowuni ze-OnePlus, ezi ziya kubiza kakhulu kunangaphambili. Umenzi kuya kufuneka aqinisekise abathengi ukuba ukonyuka kwamaxabiso kufanelekile.
Iimpawu zekhamera ye-OnePlus 7 Pro ivuza
I-OnePlus 7, ngokwayo, ayizukufaka iscreen esitsha kwaye ii-specs ezivuzayo zithi ziyakugcina itekhnoloji yokutshaja eyi-20W ngokukhawuleza OnePlus 6T Kwaye iya kuba neekhamera ezimbini zangasemva. Inguqulelo yePro ayinaso kuphela isikrini esingcono, kodwa kunye nebhetri enkulu, iikhamera ezintathu zangasemva, kunye nenkxaso ye-30-watt ekhawulezayo yokuhlawula.
UPete Lau uzimisele ukwenza isibhengezo kungekudala malunga naye. umsitho wokuphehlelelwa kwefowuni, ekuthiwa izakubekwa ngoMeyi 14.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Umphathi we-OnePlus utyhile ukuba i-OnePlus 7 Pro iya kuba nomboniso omangalisayo
I-Realme 3 Pro: Uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha
I-Redmi Pro 2 ene-Snapdragon 855 iya kuba nokunxibelelana kwe-NFC, ngokwe-Lu Weibing